Ndezvipi zvinobatsira zveAmazon keyword rank tracker?
Vakawanda vevatengesi vepaIndaneti vanorasikirwa nekutengesa kwavo uye vanotungamira nekuda kwekwikwidzikwi yepamusoro. Hazvisi nyore kufanotaura mamiriro ezvinhu akadaro iwe kana iwe hausi kuramba uchitsvaga yako keyword nzvimbo. Ichokwadi kuti kuita zvakadaro kutsvakurudza manzwi kunogona kuva kwakaoma uye nguva inopedza. Nenzira yakanaka, pane mazita akasiyana neeAmerica keyword rank tracker zvishandiso zviripo pawebhu - winter fascinators.
Muchikamu chino tichakurukura kuti tingakunda sei mamwe matambudziko makuru Amazon vatengesi vanowanzotarisana pamabasa avo uye vanogoverana newe mamwe maitiro uye zvinoshandiswa kuti uwedzere kutengesa kwechigadzirwa chako.
Ngatimbokurukurai kuti Amazon A9 algorithm inoshanda sei. Kunzwisisa maitiro emagadzirirwo aya achatibatsira kuvaka maitiro ekukunda maAmerica uye kukwidza mishonga.
Tsvakurudzo yeAmazon inoshanda sei?
Amazon A3 algorithm yakangofanana neyakanyorerwa Google maitiro ekugadzirisa. Zvisinei, pane zvimwe zvichinyanyosiyana. Kunyange zvazvo Google inotarisa pamapeji ewebhu, Amazon inonyanya kutaura nezvezvigadzirwa. Maererano nehuwandu hwemashoko, kana zvasvika pakutsvakurudza kwemagetsi, vashandisi vanotumira Amazon kutsva pane Google kutsvaga. Inogona kutsanangurwa nemuchina unowanikwa mutengo uye ruzivo rwakakwana pamusoro pemiti. Uyezve, apa unogona kuenzanisa nheyo uye chengorora maitiro pamusoro pechinhu chaunosarudza. Vashandi havadi kutarisa zvakanyanya sekutsvaga kweGoogle. Zvose zvese pamusoro pechigadzirwa zvinowanikwa pane rimwe peji. Amazon tsvakurudzo dzekutsvaga dziri kunyanya kutungamirirwa nemutengi mukana wekutenga michina yakasikwa.
Amazon inofunga nezve nhamba yezvinhu zvinosarudza chigadzirwa chigadzirwa:
Kuzivikanwa kwezvigadzirwa pakati pevatengi;
Ndezvipi zvinogadzirwa zvinoshandiswa zvakanyanya kutendeuka;
Ndezvipi zvigadzirwa zvinopa mari yakanakisisa yekutenga;
Zvakakosha sei zvigadzirwa kumubvunzo wokutsvaga.
How to measure your rank on Amazon using Amazon keyword rank tracker?
Amazon ranking algorithm is primarily based on keywords. Nokudaro, kushandisa mazwi ako akavakirwa nenzira yakakodzera ichakubatsira iwe kutarisa zvakakwirira uye kuunza mararamiro akarehwa.
Nekubatsira Amazon Keyword Tool iwe unogona kusarudza yakarurama yakakosha mazwi makuru uye kutarisa nzvimbo dzavo. Dhina yakagadzirirwa ichakubatsira iwe kuti uone kuti iwe wakasarudza zvakarurama mazwi ekutsvaga uye unozvishandisa munzvimbo dzakarurama uye dzakakosha. Uyezve, Amazon keyword rank tracker ichakubatsira kuti uende kunze kwevashandi vako uye unokwezva vamwe vangave vatengi kune marashi yako.
Pane nzira mbiri dzekutsvakurudza uye kutarisa mazwi ako ezvinyorwa - bhuku uye zvinyorwa. Kunyange zvazvo zvichibvira kuti munhu aende kuburikidza nemashoko ose ekutsvaga uye achishandisa nguva yakawanda kuti aongorore kana zvakakosha kana kwete, zviri nyore kushandisa Amazon keyword rank tracker pane. Nechidzidziro chechigadzirwa chekushandisa iwe uchachengetedza nguva yako uye uwane data yakakosha uye yakarurama.
Nzira yekuona sei makwikwi enyu ekushandisa kushandisa Amazon keyword rank tracker?
Kushandisa chigoni ichi unogona kuona zviri nyore kuti ndezvipi zvepfungwa dzako dzinotsanangurwa zvakanyatsorongeka zvakanaka uye kuti zvinoramba zvakamira sei shure kwevakwikwidzi vako. Ichi chibvumirano chinokubvumira kuti uone kuti ndezvipi zvitsva zvinotsvaga makwikwi ako ari kushandisa kuongororwa pa Amazon SERP uye kuti vanonyatsotsvaga sei pamashoko aya. Kana iwe uine nzira yakanakisisa yekuita basa rako rekunyanya kugadzirwa kweAmazon, unogona kukwereta mazwi aya uye oashandisa ivo kuti vabatsirwe. Somugumisiro, ichapa kusvitsa kuhutano hwako hwekutengesa sarudzo.